Jabuuti iyo Kenya Yaa Afrika ku matali doona kursiga aan joogtada Aheyn ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay? | XAL DOON
Home ARTICLES Jabuuti iyo Kenya Yaa Afrika ku matali doona kursiga aan joogtada Aheyn...
Maanta waxaa Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ka dhici doona dhacdo muhiimad weyn u leh Juquraafi-Siyaasadeedka iyo Diblumaasiyadda Geeska Afrika, waxaa kursiga aan joogtada aheyn ee Golaha Ammaanka ku tartami doona Dalalka Jabuuti iyo Kenya.
Si Jabuuti ama Kenya midkood uu ugu guuleysto kursigan wax uu dal walba u baahan yahay in uu helo codadka saddex meelood laba meel (2/3) oo kamid ah codadka xubnaha Golaha Guud ee Qaramada Midoobay oo ka kooban 193 kursi.
Kursiga aan joogtada aheyn ee ay u tartamayaan Kenya iyo Jabuuti waxaa hadda ku fadhiya dalka Koonfur Afrika , Jabuuti iyo Kenya midkii ku guuleysataa ayaa Afrika ku matali doona Golaha Amaanka labada sano ee socota ee 2021-2022.
Kenya wax ay si horudhac ugu guuleystay codadka ugu badan ee dalalka xubnaha ka ah Ururka Midowga Afrika kadib codeyn la sameeyay bishii July ee sanadkii la soo dhaafay Kolkaa oo Kenya heshay 37 cod halka Jabuutina ay heshay 13 cod.
Kenya laba jeer oo hore ayay kursigan Afrika ku soo matashay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, mar wax ay aheyd 1977 markale a wax ay aheyd 1998, halka Jabuuti ay hal mar uun ku fariisatay kursigan waana sanadkii 1993-sii.
Jabuuti wax ay ku tashaneysaa wadamada Carabta iyo wadamada Faransiiska gumeystay ee ku yaalla Afrika, Soomaaliya oo kor iyo hoos ba u codeyn laheyd Jabuuti waxaa intaa u sii dheer in dalka Jabuuti la tartamayaa ee Kenya ay dacwad badeed kala dhexeyso dacwaddaa oo haatan taalla Maxkamadda Cadaaladda Aduunka.
Jabuuti waxaa xurumo militari ku leh ciidamo farabadanna ay ka joogaan dalalka Mareykanka, Shiinaha, Jabaan, iyo Faransiiska sidaa darteed dalalkan wax ay u badan tahay in ay codeyn muuqata ka sameeyaan tartanka maanta si aynan wax ugu dhiman xiriirka diblumaasiyadeed Ay la kala leeyihiin labada dal.
Hadii ay Jabuuti ku guuleysato kursigan Afrika waxaa Golaha Ammaanka 2021 ku matali doono saddex dal oo Farankafoon ah oo waxaa soo raacaya Tuniisiya iyo Neyjar arrinkaas ayaana kamid ah caqabadda ugu weyn ee hortaagan in ay Jabuuti ku guuleysato kursigaan.
Ugu danbeyn waxaa la filayaa in natiijada codeynta ay soo baxdo caawa 10-ka habeenimo xiliga Muqdisho.
Waxaa qoray: Mohamed Dugoow